Ingiriiska iyo Imaaraadka oo kordhiyay farogelinta dalka iyo Berbera - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ingiriiska iyo Imaaraadka oo kordhiyay farogelinta dalka iyo Berbera
Dawlada Ingiriiska oo aad uga cadhootey go’aankii maxkamadu ku difaacday baddeena Kiiniya inagu qabsatay ayaa sheegay inay Imaaraadka kala shaqayn doonaan horumarka maamulka Somalilaan. Ingiriiska ayaa in muddo si toosa iyo si dadbanba isku dayay in loo aqoonsado maamulka Somalilaan.
Wuxuu fadhiid Shariif sh Axmed ka saxiixay waxa hadda ay u yaqaanaan ”Somaliya iyo Somalilaan” taas oo saxaafada Ingiriisku aad u isticmaasho isku dayday inay adduunka ka dhaadhiciso.
”Ingiriisku wuxu maamulka magaalada Hargeysa u isticmaalaa gobol uu isagu leeyahay ayuu yiri Xuseen Warsame isla markaana kula gorgortamo dawlada dhexe ee Somaliya si u helo qandaraasyo gaas iyo saliida.
”Marka uu ku fashilmo siyaasada dawlada dhexe gaar ahaan inta uu joogo madaxweynaha hadda waxay bilabay inuu gadaal uga yimaado qaranka oo si toosa ula shaqeeyo Muuse Biixi ayuu raaciyay.
Wasiirada Ingiriiska ee arimaha dibedda ayaa sheegtay inay Imaaraadka kala shaqaynayaan kobcinta dekedda Berbera iyada oo aan soo marayn dawlada dhexe.
Talaabooyinkan lagu mija xaabinayo qaranka ayaa imaanaysa xilli welli ayna dhicin doorashadii madaxweynaha. Waxayna rajaynayaan inuu horgale u soo baxo, haddii kale ay kordhiyaan sidii ay u curyaamin lahaayeen qaranka.